Awerɛhow kɛse kaa Yeremia (1-3a)
Yehowa betua Yuda ka (3b-16)
Wɔbɔ bena wɔ Yuda ho (17-22)
Nea ɔhoahoa ne ho no, ma ɔmfa Yehowa ho nimdeɛ nhoahoa ne ho (23-26)
9 O sɛ me ti yɛ nsu a,Sɛ m’ani yɛ nisu abura* a,+ Anka mesu awia ne anadwo,Me manfo a wɔakunkum wɔn no nti. 2 Sɛ mewɔ akwantufo tenabea wɔ sare so a, Anka megyaw me man hɔ na mafi wɔn nkyɛn akɔ,Efisɛ wɔn nyinaa yɛ awaresɛefo,+Nkontompofo fekuw. 3 Wokuntun wɔn tɛkrɛma mu te sɛ agyan;Nokwaredi ayera; atorodi nko ara na ɛwɔ asaase no so.+ “Wɔkɔ wɔn anim wɔ bɔne mu,Na wɔmfa me nyɛ hwee,”+ Yehowa asɛm ni. 4 “Obiara nhwɛ ne ho yiye wɔ ne yɔnko ho,Na wo nua mpo, mfa wo ho nto no so. Efisɛ onua biara yi ne nua ma,+Na ɔyɔnko biara sɛe ne yɔnko din.+ 5 Obiara sisi ne yɔnko,Na obiara nka nokware. Wɔakyerɛ wɔn tɛkrɛma atorodi.+ Wɔyɛ bɔne de hyɛ wɔn ho brɛ. 6 Nnaadaa mu na wote. Nnaadaa nti, wɔmpɛ sɛ wohu me,” Yehowa asɛm ni. 7 Ɛno nti, nea asafo Yehowa aka ni: “Mɛnan wɔn, na mahwehwɛ wɔn mu.+Sɛ manyɛ me man babea saa a, dɛn bio na mɛyɛ no? 8 Wɔn tɛkrɛma yɛ agyan a edi awu; nnaadaasɛm na ɛka. Onipa de n’ano ka asomdwoe asɛm kyerɛ ne yɔnko,Nanso ne mu de, ɔtetɛw no.” 9 “Nea wɔayɛ yi, ɛnsɛ sɛ mitua wɔn so ka anaa?” Yehowa asɛm ni. “Ɔman a ɛte saa no, ɛnsɛ sɛ meyɛ* wɔn bi tua ka anaa?+ 10 Mesu mmepɔw no na mabɔ bena,Na mmoa adidibea a ɛbɛdan sare so nti, mɛto awerɛhow dwom,*Efisɛ wɔahyew ne nyinaa, na onipa biara ntwam wɔ hɔ,Na wɔnte nyɛmmoa nne wɔ hɔ. Ewim nnomaa ne mmoa aguan; wɔn nyinaa kɔ.+ 11 Mɛma Yerusalem adan abo asum hɔ,+ baabi a sakraman bɛtena,+Na mɛma Yuda nkurow adan amamfo a obiara nte mu.+ 12 Hena na ɔyɛ onyansafo a ɔbɛte eyi ase? Hena na Yehowa akasa akyerɛ no a ɔno nso de bɛto gua? Adɛn nti na asaase no asɛe? Adɛn nti na ahyew sɛ sare,A enti obiara mfa so bio yi?” 13 Yehowa yii ano sɛ: “Efisɛ me mmara* a mede maa wɔn no,* wɔtow kyenee baabi; wɔanni so, na wɔantie m’asɛm. 14 Mmom wɔyɛɛ asoɔden dii wɔn ankasa koma akyi,+ na wokodii Baal abosom akyi sɛnea wɔn agyanom kyerɛɛ wɔn sɛ wɔnyɛ no.+ 15 Ɛno nti, nea asafo Yehowa, Israel Nyankopɔn no aka ni, ‘Hwɛ, mɛma ɔman yi adi awɔnwene, na mama wɔanom nsu a awuduru wom.+ 16 Mɛbɔ wɔn ahwete aman a wɔne wɔn agyanom nyinaa nnim so no so,+ na mɛma sekan adi wɔn akyi akosi sɛ mekunkum wɔn nyinaa.’+ 17 Nea asafo Yehowa aka ni,‘Munnwen nea ɛrekɔ so no ho. Momfrɛfrɛ mmea a wotumi to awerɛhow nnwom* mmra,+Na monsoma nkɔfrɛ mmea a wonim su yiye mmra, 18 Na wɔnyɛ ntɛm mmesu mmɔ bena mma yɛn,Na nisu ntene mfa yɛn ani ase waawaa,Na nsu nsɔn mfi yɛn anisuatɛtɛw so.+ 19 Na wɔte benabɔ wɔ Sion sɛ:+ “Hwɛ sɛnea wɔayɛ yɛn pasaa! Hwɛ sɛnea yɛn anim agu ase pɔtɔɔ! Efisɛ yɛagyaw asaase no hɔ, na wɔadwiriw yɛn afi agu.”+ 20 Mmea, muntie Yehowa asɛm. Momma n’anom asɛm nkɔ mo asom. Monkyerɛ mo mma mmea benabɔ yi,Na obiara nkyerɛ ne yɔnko awerɛhow dwom* yi.+ 21 Efisɛ owu aforo afa yɛn mfɛnsere mu aba;Abɔ awura yɛn abankɛse muSɛ ɛrebɛsesaw yɛn mma afi mmorɔn so akɔ,Na afa yɛn mmerante afi mmɔnten so akɔ.’+ 22 Ka sɛ, ‘Nea Yehowa aka ni: “Nnipa afunu begugu hɔ sɛ sumina* wɔ asaase ani,Ɛbɛyɛ sɛ hwiit* a atwafo atwa agu hɔ foforoA obiara nni hɔ a ɔbɛboaboa ano.”’”+ 23 Nea Yehowa aka ni: “Mma onyansafo mmfa ne nyansa nnhoahoa ne ho;+Mma ɔhoɔdenfo mmfa n’ahoɔden nnhoahoa ne ho;Na mma osikani mmfa n’ahonyade nnhoahoa ne ho.”+ 24 “Mmom nea ɔhoahoa ne ho no, ɔmfa eyi nhoahoa ne ho: Sɛ ɔwɔ me ho nhumu ne nimdeɛ,+Sɛ mene Yehowa, Nea ɔda ɔdɔ a enni huammɔ adi na obu atɛntrenee na ɔyɛ adetrenee wɔ asaase so no,+Efisɛ eyinom na m’ani gye ho,”+ Yehowa asɛm ni. 25 “Hwɛ! Nna bi reba,” Yehowa asɛm ni, “na obiara a watwa twetia* nanso ontwaa twetia no, mebu no atɛn;+ 26 Egyptfo+ ne Yudafo+ ne Edomfo+ ne Ammonfo+ ne Moabfo+ ne obiara a ɔte sare so+ a watwitwa n’asontɔrem nwi no, mebu wɔn nyinaa atɛn, efisɛ amanaman no nyinaa ntwaa twetia, na Israel fi nyinaa nso ntwaa wɔn koma twetia.”+
^ Anaa “asuti.”
^ Anaa “mede sii wɔn anim no.”
^ Anaa “watwa ne dua.”